SADC Summit Inotanga kuNamibia Masangano Achirambidzwa Kuratidzira
Musangano mukuru wepagore wevatungamiri venyika dziri muSADC, weSADC Summit, watanga muWindhoek, kuNamibia, paine tarisiro yekuti mutungamiri weSouth Africa, uye vari muyananisi munyaya yeZimbabwe, VaJacob Zuma, vachasuma vamwe vavo pavasvika nenyaya yeZimbabwe.
NeSvondo manheru, SADC Troika yakazeyawo nyaya yeZimbabwe, pakaonekwa kuti hurumende yemubatanidzwa iri kufambira mberi zvakanaka, kunyange hazvo pachine zvinetswa zvisati zvagadziriswa.
Zvimwe zvezvinonzi zvichiri kunetsa inyaya yekudomwa kwagavhuna webhanga guru renyika, VaGideon Gono, kudomwa kwaVaJohannes Tomana semuchuchisi mukuru, pamwe nenyaya yekusagadzwa semutevedzeri wegurukota rezvekurima, kwaVaRoy Bennett nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe.
Masangano akazvimirira anobva munyika dziri muSADC, ari kusanganawo zvakare kwakare kuNamibia kumusangano weSADC People’s Solidarity Network, uyo unopa mukana kuvanhuwo zvavo wekuti vakurukure zvinetswa zvavanosangana nazvo zuva nezuva.
Asi masangano ari kuNamibia akarambidzwa kuratidzira nemapurira kubva musi wa12 kusvika musi wa20 Nyamavhuvhu, uye haasi kubvumidzwa kusvika pedyo nepari kusangana vakuru vemuSADC.
Mutungamiri wesangano reNamibian National Society for Human Rights, VaPhil ya Nangolo, vanoti zvinhu zvinosuwisa kuti dunhu reSADC rine nyika dzakawanda dzichiri kutyora kodzero dzevanhu vadzo. Vatiwo vanorwadzikana zvikuru nekurambidzwa kuratidzira kwanga kwakarongwa nemasangano emuSADC.
Masangano anodarika gumi anobva kuZimbabwe arikowo kuNamibia. Musangano weSADC uri kuitwa panguva apo sangano iri riri kucherechedza kusvika kwaro makore makumi matatu raumbwa.
Mutungamiri weZimRights, VaOkay Machisa, varikowo kumusangano weSADC uyu. VaMachisa vanoti masangano akazvimirira haana kufadzwa negwaro rakasvitswa kuSADC Troika, rekuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka muZimbabwe, ipo paine kunetsana pakati paVaMugabe nemutungamiri wehurumende, VaRobert Mugabe.